Xog ku saabsan weerarkii Hotel Afriik, magacyada dadka dhintay & beesha ku shirsanayd ee la weeraray.
January 31, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (Muqdisho)-Hotelka Afriik oo ku yaalla agagaarka isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho waxaa weli ka dhex dagaalameysa koox hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana waqti dheer qaadatay in halkaasi laga saaro kooxdii weerarka soo qaaday.
Xilligii weerarku bilowday waxaa la xaqiijiyey inay gudaha hotelka kujireen ciidamo badan oo ay wateen saraakiisha kala ah Jeneraal Indhacadde, Jeneraal Galaal, Jeneraal Laba Afle, iyo saraakiil kale, kuwaas oo iska caabin adag ay kala kulantay kooxdii weerarka soo qaaday.
Waxaa goobta laga soo badbaadiyey dad ay kujiraan Mulkiilihii Hotelka Xuseen Goley oo ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn magaalada Muqdisho, Jeneraal Indhacadde, Jeneraal Galaal, Jeneraal Laba Afle, guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cirfo, waxaana kamid ahaa dadka dhintay AUN Cabdulaahi Nuure Siyaad iyo Biiriye Xaashi oo ka mid ahaa dadkii weerarka la kulmay.
Waxaa la xaqiijiyey in xilligii uu dhacay weerarkaasi uu gudaha hotelka shir uga socdey saraakiisha iyo waxgaradka Beesha Cayr oo ka arrinsanayey arrinta guddoomiyihii degmada Hodon ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhegajuun oo dhowaan Muqdisho lagu diley.
Alle ha u naxariisto dadka ku geeriyooday, ehelkoodana samir iyo iimaan.
Sida aan horay dhawr goor u sheegayba, aniga oo ah MADAXWEYNAHA mandaqadda SSC, Soomaalidu weli ciyaar bay ku jiraan oo uma muuqdaan kuwo dawladnimo DHAB ah raba. Waxaa ku meeraysanaya MAAFIYO maxalli ah oo xiriir la leh maafiyadda deggan XALANE & waddamada dersika ah, kuwaas oo u sheegta madaxweynayaal, xildhibaano, wasiirro & madax maamul-beeleedyo. Weliba waxa Xamar ka socda ma aha wax innaba caadi ah; waa goob dagaal.
Waxa aan marka ku baaqi lahaay in doorashoodhinka dhinac la iska dhigo maaddaama MAAFIYADII uun ay is dooranaydo oo la isugu yimaaddo shir guud oo Soomaaliyeed, shirkaas oo ay ka soo qaybgalayaan dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed si dastuur & dawladnimo loo dhisto.
Waxa Soomaaliya ka socdaa wax la tilmaami karo ma aha. Tusaalaha ugu dhowi waa shirka lagu baaqay in uu ka dhacahayo Dhuusta-mareeb. Waxa la rabaa in annaga oo soo jeedna nalaka dhaadhiciyo DOORASHOOYIN baa laga hadlayaa, iyada oo xabbad la isu haysto.
Farmaajo & Madoobe waa maxay doorashada ay ka wada hadlayaan? Dad nabadi dhextaal baa doorasho ka wada hadla ee dad islaynaya oo weliba dawlado isu soo kiraystay doorasho kama wada hadlaan ee XABBAD-JOOJIN & DHIIG JOOJIN bay ka wada hadlaan. Intaas baa tusaale innoogu filan heerka uu waddankeennu marayo iyo halka aan taagganahay. Sidaa daraaddeed, doorasho majirto e halla isugu yimaaddo shirguud oo soomaaliyeed kaddib 8da Febraayo insha Allah.
Dadkan dhintay AUN tankale
Somalidu hadii aay diidan
Inay xoojiyan doladnimada
Sidaas bay malinkasta
Cadowgu ulayen hadaba qabiilka iskadaya oo qaran xoogan oo idinka difaaco
Cadowgan horarka dhista
Intii dhimaty samir iyo
Iimaan kuma dhawaca ahna
Cafimaad insha allah
Kkkk,farmaajo QOF ka nasiib xun kana nasiib daran majiro, wuu nasiib badnaa waayo 90% Soomalida taagero ayey u heysay waxa nasiibkisa burburyey waa siyaasada foosha xun oo maangabka ah uu cayaarey oo kala ah.
1) dagaal cad uu ku qaadey maamul goboleedyada qaar.
2) Dagaalka uu ka bilaabey gedo iska horkeenay dadka deeganka.
FARMAAJO wuu ku fashilmey hogaankiisa.
Correction, Farmaajo qof ka nasiib daran kana nasiib fiican …..